Ka bilaabida mashruuc Git iyo Google Code (Qaybta III) | Laga soo bilaabo Linux
Oo haddaba, qaybta ugu macaan ee casharradan yar.
1 4. Waxaan abuureynaa mashruuceena
2 5. Waxaan bilaabaynaa Git
3 6. Ku darida faylasha
4 7. Abuuritaanka noocayaga
5 8. Ku darista bakhaar fog
6 Goor dhaw…
4. Waxaan abuureynaa mashruuceena
Waxaan abuureynaa tusayaal ka kooban dhamaan faylasha la xiriira mashruuca. Tusaale ahaan, gudaha HOME isticmaaleheena waxaan abuureynaa galka Waad salaaman tihiin aduunka.
Waxaan galnaa galka cusub ee la abuuray adoo adeegsanaya amarka cd.
Waxaan abuuraynaa faylka barnaamijkeena «Waad salaaman tihiin aduunka«. Waxaan isticmaali karnaa tifaftiraha qoraalka oo aan aad u jecel nahay. Hadda si loo fududeeyo waxyaabaha si fudud waxa aan sameyn doonno waa fulinta amarka soo socda:
Sidan oo kale waxay si fudud u abuurtaa faylka helloworld.py gudaha galka Waad salaaman tihiin aduunka iyadoo la raacayo tilmaanta daabacan doonta salaanta.
Waxaan ku tijaabin karnaa barnaamijkeena cusub tilmaanta soo socota:
~ / HelloWorld $ Python helloworld.py Waad salaaman tahay dunida ~ / HelloWorld $
Sidaas ayaan ku abuurnay noocayagii ugu horreeyay ee barnaamijka. Hadda waa arrin bilaabis ah tag si aad u hubiso sii deyntayada mustaqbalka.
5. Waxaan bilaabaynaa Git
Si aad u bilawdo adeegsiga tag waxaan ku habeyn karnaa qaar ka mid ah xulashooyinka guud, buugga ku yaal qaybta 1.5 qaar ka mid ah xulashooyinkaas ayaa faahfaahsan. Xaaladdan oo kale waxaan doonayaa inaan ku tuso sida loo qaabeeyo oo keliya xulashooyinka keydinta deegaanka.
Ikhtiyaariyadaan waxaan ku cadeynayaa in magaceyga isticmaale ee mashruucan uu yahay «lecovi«, In e-maylkeyga mashruucan uu yahay«colomboleandro@bitson.com.ar»Iyo in tafatiraha asalka ah aan rabo inaan isticmaalo markaan ordayo gasho waa sababtoo ah.
Si aad u yeelato tag nidaamkeena waa inaan ku xirnaa xirmada git-ka.
Faa'iidada isticmaalka tag waa inay ku shaqeyso gudaha gudaha galka shaqada ee mashruuceena. Taasi waa sababta aan ugu qasbanaanayno inaan ku bilowno galka mashruuca ee amarka init.
~ / HelloWorld $ git init La bilaabay kaydinta Git madhan ee /home/leo/HolaWorld/.git/ ~ / HelloWorld $
Hadda waxaan sameyneynaa feyl .gitigoore maxaad dhihi doontaa tag waa maxay faylasha iyo tusmooyinka aan loo baahnayn inaad raacdo Wixii macluumaad dheeraad ah waxaad kala tashan kartaa buug. Xaaladdan oo kale waxaan kuu sheegaynaa inaad iska indhatirto isla faylka .gitigoore iyo dhammaan faylasha ku dhammaanaya .pyc.
6. Ku darida faylasha
Hadda waa inaan ku darnaa feylasha (xaaladdan waxaan haysannaa hal feyl oo keliya helloworld.py, laakiin waxaan u maleynayaa inaad heshay fikradda, sax?). Adeegsiga amarka ku dar waxaan u sheegi doonaa inay ku darto dhammaan waxyaabaha ku jira galka (marka laga reebo waxaan ku qornay faylka .gitigoore).
~ / HelloWorld $ git ku dar.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in halkan aan ku isticmaalnay. (muddada) si aan ugu sheegno inay ku darto dhammaan waxyaabaha, waxaan samayn lahayn liis gooni u kala fog oo ah faylasha iyo buuggaagta aan dooneyno inaan ku darno. Ama fulinta amarka si isdaba joog ah tag ku dar.
7. Abuuritaanka noocayaga
Mar alla markii aan qaabeynay tag oo lagu daray dhammaan feylasha aan dooneynay inaan ku xakameyno nidaamkayaga xakamaynta nooca waa inaan sameynaa kuwa caanka ah gasho.
Tilmaamahan waxaan ku dhisi doonnaa dhibic taariikhdeena horumarineed. Kiiska ugu horeeya waa caadi in la sameeyo a gasho leh sharaxaadda «Bilowga hore«. Caadi ahaan waan ka tagaa gobolka qorsheeyay oo waxaan kaliya maamula amarka gasho ikhtiyaar leh -a.
Tani waxay furi doontaa tifaftiraha aan horay ugu dejinay, kiiskeyga sababtoo ah, oo waxaan qori karnaa faahfaahinta gasho. Xaaladdan oo kale, waxaan doonayaa inaan qoro tan kore. Marka aan faylka ku keydinno tifaftiraha, tag ayaa daryeelaya sameynta gasho.
8. Ku darista bakhaar fog
Hadda waa waqtigii aan u sheegi lahayn kuwayaga tag maxalli ah oo leh bakhaar fog. At buug Waxaan ku sharaxnay nidaamka si aan u abuurno keydka gudaha GitHub. Qaybtaan waxaan u adeegsaneynaa wixii aan kaga tagnay qeybta 3 ee qoraalkii hore.
Si loogu daro keydka fog waa inaan isticmaalnaa amarka git fog ku dar halkaas oo magac ama magac kale loogu gudbiyo keydka iyo URL-keeda dood ahaan. Xaaladdan oo kale waxaan u adeegsan doonnaa midka ka socda mashruuca aad ku abuureyso Nambarka Google.
Dabcan waad abuuri kartaa mashaariic aad iska leedahay isla markaana u adeegsan kartaa si isku mid ah.
~ / HelloWorld $ git fog ku dar gc https://code.google.com/p/lecovi-hello-world/
Hadda ugu dambeyntii si aan ugu rarno bakhaarkeena maxalliga ah kan fog waxaan fulinnaa amarka riix.
Sida ku jirta qaybta 3 waxaan abuurnay faylka .netrc waxay u adeegsan doontaa cabbiraadaha ku kaydsan faylkaas si ay ugu xirmaan adeegaha. Laankuna wuu kici doonaa Master keydka aan keydsano sida gc.
Bogga mashruucayaga Nambarka Google, waxaan ku arki karnaa qaybta source qayb ahaan Browse nuxurka mashruuceena.
Ilaa hada waxaan dhameystirnay casharka ku saabsan sida mashruuc loogu bilaabo tag y Nambarka Google.
Qeybta soo socota iyo tan ugu dambeysa ee casharradan yar-yar waxaan dib u eegi doonnaa sida isbeddel loogu sameeyo mashruuceena iyo inay ka muuqanayaan nidaamkayaga xakamaynta nooca.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Casharrada / Buugaagta / Talooyinka » Ka bilaabida mashruuc Git iyo Google Code (Qaybta III)
maxaad ugu dartay feylka .gitignore .gitignore?
Micno malahan: P, feylkaas sidoo kale waa inuu galiyaa keydka.
Waad saxantahay, macno badan malahan inaad sameyso. Waxay ahayd tusaale ahaan tusaale ahaan in la arko sida ay u shaqeyso oo tusaale looga dhigo. Waa aniga oo aanan dhigin faylal badan oo aanan doonaynin inaan aad u adkeeyo!
Waad ku mahadsantahay cadeyntaada.
Taxane aad u fiican! Waan kugu hambalyeynayaa!
Great Pablo, farxad weyn inaan kaqeyb qaato!
Ku muuji saamaynta Gentoo oo leh Brightside iyo Skippy